MIXIIN WALIIF BIRMATTEE , BOFA AJJEEFTII !!!
Qabsoon keenya jabaateera. Wareegamni kaffallee qaalii ta’uus, sadarkaan irra jiru wareegama keenyaaf nu hin gaabbisiisu. waan wareegamneef bira ga’uuf daandii tolaarra jira. Waan tolaa jiru kana Injifannoon goolabuuf , ammallee jabiina keenya gaafata. Carraaleen duubatti nu deebisuu malan adda baafatanii irratti hojjannaan, galiin keenya shakkii tokkollee hin qabu. Adeemsa keenya haa ilaallu,
1. Bara itti Qabsoon eegalamtee,
2. Baratti Qabsaa’oonni walitti dhuftee hundee gadi dhaabdee,
3. Baroota Qabsaa’oota itti horannee, dhaaboota hundeessinee,
4. Baroota ykn sadarkaa Dhimma qabsoo ummataa addunyaatti beeksifnee,
5. Baratti Ummata ittii jaarree fi barsiifnee
6. Baratti ummati itti dammaqee Qeerroon keessaa itti ba’ee
7. Baroota Fincillii Diddaa gabrummaa itti dhohee,
8. Waggoota Fincillii diddaa gabrummaa mootummaa raasee,
9. Waggoota Qabsoon Oromoo sadarkaa amansiisaa irra ga’ee fi diinni harka itti kennatee,
10. Waggaa dhiiga Qabsaa’ootaa fi Qeerroon Mootummaa keessatti geeddarumsi dhufe,
11. Waggaa Araarrii Dirqiiitti dhufee, Ashabbaariin Firatti geeddaramee Araarri bu’ee,
12. Waggaaitti ABO FI Dhaaboonni siyaasaa Oromoo hundii Biyyatti walitti dhufan irra jirra.
Asirra ga’uuf Lubbuu fi Qabeenyaa danuu itti dhabneerra. Adeemsa kana keessa dogoggoorris ta’ee, waan sirrii hojjachuun waan jiraati. Kandiinni nu miidheerra walillee miinee asi geenyerra. Shiraa fi hammeenya walii irratti hojjannees dhumarratti asi geenyee jirra.akka walii galaatti tokko hidhee fi ajjeefamee bakka tokkotti dhufuuf jira.kun adeemsuma siyaasaati. waan dabree kana hundaa qabatanii adeemsa jiru xumura itti gochuuf gama hundaan hojjachuun la furmaati biraa hin jiru. Amma Sochii hegaree keenyaaf nu eeggatuu tarii kan kanaan duraa irra jabaa fi wareegama ulfaataa nu gaafatu ta’uu mala. Kanarraa kaanee kallatti wal qabsiisuun dansaadhaa.
1. Dhaaboonni siyaasaa maqaa Oromoon jiran heddummaachuun ni jira. Kana garuu akka waan qabsoof gufu ta’uutti ialaalanii abdii kutachuun hin barbaachisu. Ummati dhiibbaa taasisuun qofaa waan sirraa'uu danda'uudhaa. Dhaabbileen siyaasaa ammo furmaata isa dhumaa argamsiisuu irratti haa hojjatan. Kun yeroo fudhachuus danda’aa. Garuu amma waggaa tokkotti akkasumatti ittti fufaniis miidhaa hin qabu. Inni guddaan diina irra goraniiwalduradhaabbachurraa of qusachuu qofaadhaa.dhaaboonni kun wal hubannoo qabu taanaan baayyinni saanii akkaataa itti nu fayyaduu jiraachuu mala. Kana gadi taa’anii hojii walii laachuun furamuu danda’aa. Haala kana sirreessuuf dhimma kana warruma siyaasaa fi abbootii gadaaf dhiisanii sochii jiru itti fufu wayya. Bakka tokkotti galuuf jarjarsurra, gadi fageenyaan irratti hojjatanii waan dhalootaaf furmaata ta’uu qopheessuu barbaachisa. Filannootti waan deemnuuf maal nu wayyaa jedhanii mari’achuu barbaada. Lakkoofsaan heddummaannee jedhanii qofaa walitti dhufuun furmaata hin fidu.
2. Adeemsi Siyaasaa Itoophiyaa keessaa kallattii isaa jijjiiruu danda’aa. Warri Tigiree deebi’anii ka’uuf carraan jiraachuu danda’aa. Kanaaf waan fedhee yoo dhufee caasaa Ijaarsaa bifa kamiituu ifatti baasuun barbaachisaa miti. Keessattu Qeerroon caalaatti lafa jala hojjachuun barbaachisaadhaa. ABOn galuus, Simannaa jalqabarra taasifnuun ala, Ummatoota baaragsuun walitti dhufeenya Ummatoota waliin qabnuu shakkii keessa galchuu ta’aa. Ummatoonni hundii osoo rafanii waa hundaa jalaa fixuu qabnaa. Saboonni Oromiyaa keessa jiran yaaddoo akka hin seennee wabii ta’uufii qabnaa. Waan yeroo filannoo akka galaanaa irra galagalutti hojjachuu qabnaa.kanaaf hojiin dhokisaa,,,ijaarsii dhokisaa kkf ammallee jabiinaan itti fufu qabu. Hojiin nu eeggatuu ammallee dantaa keenyaaf jennee miidhama keenya dhokifannee irra aanuuf hojjachuu qabnaa. Saboota akka Beenashaangul…Sidaamaa…Gaanbeelllaa kkf haalaan irratti hojjannee ofitti makachuu fi hegaree keenyaaf rakkoo ofirraa xiqqeessuu gaafata. Qeerroon Oromoo gonkumaa of mul’isuu amma argaa jirru dhaabuu qabnaa. Oromiyaa keessatti caasaa haalaan jabaa ta’ee deebisnee ijaaruuf gadi jennee qotuu qabnaa.
3. Dantaa keenyaaf jennee garee AANGOO MOOTUMMAA qabatee jiru kana keessattu hanga filannootti waan jiruu nuuf mijatamoo miti ? jedhanii ilaallachuun gaariidhaa. Gareen mootummaa dhuunfatee jiru kun qormaata seenuu danda’aa ykn kanarra jabaachuu danda’aa. Waan isa mudatuu kana keessatti dantaa keenya ilaallee socha’uun barbaachisaadhaa. Akka kiyyatti ,garee amma Angoon irra jiru kana nurra ,,,Amaaraa fi Tigireetu dhiphisuuf jira. Gabaabaatti gareen kun Sirna Fedaraalizimii yoo deeggaree, warri iyyuuf qaanii hin qabnee hundi isaan duradhaabbatu. Kanaaf, dantaan keenya asi keessaa sagalee keessaa haqifnee, dhiibbaa isaan irra ga’uu laaffisuudhaa. Kanaaf yeroon isaan Utubnuus jiraachuu mala, ykn dhiisnu jira. Karaa amma irra jiraniin, qaawwaa hedduu waan qabaniif akkaataa itti lafa jalaan itti seenani kallattii argisiisan jiraachuu mala. Opdon waan amma itti jirtuu caalaatti jabeessanii akka raawwattu gochuun abshaalummaadhaa. Dhaabbileen siyaasaa Itooophiyaa leellisan kan biyya alaa dhufan hundii faallaa keenya jiranii hubadhaa. Humni Angoorra jiru ammo sagantaa siyaasaa isaan faallaa isaanii irra jira. Walumaagalatti waan jiru akka dantaa ofitti gaggeeffachuuf haalaan haxxummaa nu barbaachisaa qalbifadhaa.
4. Araarri ega bu’ee, Fincilli hin jiru. Deeggarsii fi mormiin nagaa jiraachuu mala. Saboota Biyyattii hunda keessaa ijaarsa Ummataa jabaa ka qabuu Oromoodhaa. Isaan kana booda wal ijaaru ta’aa. Carraa kanatti dhimma baanee, ijaarsa keenya caalaatti jabeessuu fi ijaarsa siyaasaa irra tarree, ijaarsa aadaa keenyaa jabeeffachuu qabna. Eenyummaa Oromoo Ummata keessatti gadi dhaabuu barbaachisa. Amma waa’ee Siyaasaa Oromootti himan tokkollee hin qabnuu. Aadaa keenya babal’ifachuu,,,aadaa habshaa waggaa amma kanaaf nu miidhee adda baafatanii akka dhaabbatan taasisuu akkasumas,, gochawwan dhaloota keenya laamsheessaa jiran oromiyaa keessaa buqqisuuf Abbootiin gadaa fi Qeerroon jabiinaan opdo qajeelchanii itti fayyadamuu qabu. Seer-dhablummaa fi hanna guutuu oromiyaa keessaa dhabamsiisuu qaban. Oromiyaa caalaatti bakka nageenyaa fi mirgi dhala namaa itti kabajamuu taasisuuf hojjachuu nu barbaachisa.
5. Diinni kana booda ykn yeroof humnaan nutti hin seenuu. Walitti nu diruu fi jabaa keenya filee dhokisaan ajjeesuun itti fufu mala. Kanaaf nageenya keenya mirkaneessuuf hundumtuu dirqamasaa akka ta’ee bakka hundatti barsiisuu barbaachisa.
6. Inni dhumaa Qeerroo fi Qarreef dhaamsa jabaan dabarsuu barbaada. Injifannoo har’aan ka isin ga’ee ,Naamuusaa fi murannoo keessanii. Addatti caasaan keessan diinaaf ifa ta’uu dhabuuisaatii. Jabinni keessan kun Injifannoo Oromoo hanga mirkaneessutti itti fufu qaba. ABOn Biyya keessa seenullee, mirgaan gallee jettanii hin dagamiinaa. Hojii jabaan isin eeggatu ka waggaa 2n dhufaniitii. Sirbuu fi of mul’isuu hanqifnee, gaafa sagalee haa mul’annuu. Wareegamni keessan firii akka godhatuuf ijaarsaa fi deemsa keessan gonkumaa dabarsitanii hin laatiinaa. Gonkumaa !!! hojiin nu eeggatu kanarra hamtuudhaa. Diinni keenya amma wayyaanee qofaa miti 50 dha. Kanaaf kanarra qaroo ta’aa.
7. DHAABBILEE SIYAASAA OROMOOF, carraa Oromoof banamee kana ofitti akka hin cufnee jabeessinee tikisuu qabnaa. Balbala nutti cufamee dhiigaa fi lafee ijoollee keessaniin banamee itti seentanii jiratan. Kun qalbii keessan amansiisuu qaba. Mammaakisii Oromoo “MIXIIN WALIIF BIRMATTEE ,,BOFA AJJEEFTII “ kun fakkeenya dansaa isiniif haa taatuu. Oromoon yoo jabaatee kaitti injifatu, yoo laafatee bara baraaf ka isaaf dhumatu ta’uu qalbifadhaa. Amma diinni nu kuffisuus,,nu duradhaabbatuus,,,nu laaffisuus hin jiru. Yoo kufnees kaanees, nuumatu ofirratti mura. Kun haqa. Waan akka sababaatti dhiheeffannuu hin qabnuu. Saboota Biyyatti keessaa akka sabaatti Oromoo caalaa ka ijaaramee amma hin jiru. Laafinnii dhaaboonni siyaasaa baayyachuu fi ummata kanatti dhimma itti ba’uurratti qaawwaa umamuu maluutuu murteessaadhaa. Kanaaf Ummataaf qabsoofnaa ega jettanii ,fedhii Ummataa guutaa. Ummatii ka filatuu fi barbaadu kabajaafii. Xiiqii wal qabattanii gandaatti fiiguun kun Oromoof furmaata hin fiduu. Ummati murtee dhumaa fudhachuuf jaarsummaa eenyullee hin barbaadu. Ifatti dubbataa jiraa, diina mogolee jabeessurraa dafaa wal jabeeffadhaa. Kabajaa waliif qabaadhaa. Dhugaa isa dhugaa qabuuf galchaa wal amanaa, waliif amanamaa.
HORAA BULAA !!!!